Bogga ugu weyn 19 Siyaabood oo Loogu Heli Karo Xubinnimada Costco Lacag La'aan 2022
Xubinnimada bilaashka ah ee Costco waxay ku siinaysaa wax ka badan kaliya inaad cunto ka iibsato bakhaarka aad jeceshahay.
U safrida xubin Costco ahaan waxay ku siinaysaa marin u helka adeegeeda safarka ee gaarka ah kaas oo kuu ogolaanaya inaad kala xaajooto qiimayaasha xidhmooyinka fasaxa, huteelada dalxiiska, iyo xataa baabuurta kirada ah. Nasiib darrose, xubinnimada Costco bilaash maaha - tani waxay la macno tahay inaad lacag bixisid si aad ugu raaxaysato adeegyadan.
Hagaag, haddii aad xoogaa dulqaadasho dheeri ah samayn lahayd, maqaalkani wuxuu si fudud kuugu qaadi doonaa sida loo helo Xubinnimada Costco ee bilaashka ah 2022.
Cajiib, sax? Farxadani waxay noqon doontaa mid ka sii yaab badan haddii aad gabalkan akhrido ilaa dhammaadka. Jadwalka tusmada hoose wuxuu iftiiminayaa siyaabahaan suurtogalka ah ee lagu helo xubinnimada Costco oo bilaash ah. Waxay sii muujinaysaa, taxane su'aalo khuseeya oo si habboon looga jawaabay qaybtan.
Waa imisa Qiimaha ku biirista Costco?
Adigoo ka fikiraya sababta aadan u iibsan karin xubinnimadaada halkii aad ka dhex mushaaxi lahayd internetka? Hagaag, waa inaad xoogaa sugtaa ka hor intaadan kala tagin ugu yaraan $ 60.
Waxaa jira habab ka fiican oo lagu heli karo dalabkan. Xubinnimada Costco waxay ku kacaysaa $ 60 sanadkii ugu yaraan ama halkii aasaasiga ahayd. Si aad u hesho Xubinnimada Fulinta Costco Gold Star sanadkii waxay ku kacaysaa $ 120.
Waxay bixisaa 2% abaal -marin lacageed oo dhan $ 1, 000. Haddii ay tani u muuqato mid xad -dhaaf ah, haddana aad runtii rabto inaad noqoto xubin Costco, hubaal waan ku tusi doonaa sida.
Costco ma leeyahay Xubinnimo Bilaash ah?
Nasiib darrose, Costco ma bixiso xubinnimo bilaash ah. Xitaa xubin -ka -dhimista Costco, waxay u badan tahay inaadan mid helin.
Si kastaba ha noqotee, Costco wuxuu ballan qaadayaa inaad soo ceshan karto khidmadda xubinnimadaada markaad bilowdo dukaamaysiga. Maaddaama aysan jirin dalab xubinnimo bilaash ah - la yaaban maxay tahay xubinnimada Costco ugu yar?
Waa maxay Xubinnimada Costco ee Ugu Qaalisan?
Waan jeclahay erayga ugu qaalisan. Sababtoo ah ugu yaraan xubinnimada Costco weli waa qaali in kastoo.
Xubinnimada Costco ee ugu jaban waa Xaaladda Dahabka. Waxay ku siineysaa inaad gasho goob kasta oo Costco ah oo adduunka oo dhan ah oo xubin kasta oo qoyskaaga ka mid ahi ay isticmaali karto Costco.
Waxay ku kacday $ 60 sanadkii, ikhtiyaarka xiga wuxuu ku kacayaa $ 120.
Maxay bixisaa Xubinnimada Costco?
Noqoshada xubin Costco ah waxay u baahan tahay ku raaxaysiga dhammaan heshiisyada xubinnimada Costco. Sida laga soo xigtay Mashed, hoosta waxaa ku yaal dhowr heshiisyo xubinnimo oo aad ku raaxeysan karto xubin ahaan Costco.
Ku hel xubinnimada qiimo dhimis
Ku bixi Costco hababka lacag bixinta oo dheeraad ah
Had iyo jeer waad heli kartaa lacag celin haddii aadan ku faraxsanayn xubinnimadaada
Xubnaha Costco way wadaagi karaan xubinnimada
Xubinnimada Costco waxay ku gelineysaa dukaan kasta oo adduunka ah
Muddo intee le'eg ayay Xubinnimada Costco socotaa?
Iyada oo ku xidhan xaaladda xubinnimada Costco, lacagtaada sanadlaha ahi waxay dhacaysaa 12kii biloodba mar. Waxaad haysataa ilaa maalinta ugu dambaysa bisha si aad u cusboonaysiiso rukunkaaga.
Si kastaba ha noqotee, haddii cusboonaysiinta la sameeyo 2 bilood kadib dhammaadka xubinnimada hadda jirta, waxaa jiri doona kordhinta 12 bilood laga bilaabo taariikhda dhicitaankaas.
Way iska caddahay in xubinnimada Costco ay ku baxdo lacag aad u badan sax? Maqaalkani wuxuu hadda tusi doonaa 19 siyaabood oo lagu helo kaarka xubinnimada Costco oo lacag la’aan ah si loogu raaxeysto heshiisyada xubinnimada Costco.
Sideen Ku Helaa Xubinnimada Costco Bilaash ah?
Labada siyaabood ee suurtogalka ah ee lagu heli karo xubinnimada Costco ee bilaashka ah waa iyada oo -
dib u dhigista kharashka xubinnimada
helitaanka heshiisyada xubinnimada
XIDHIIDHKA: 20 SUV -yada ugu Qiimaha Badan 2022 | Mileage, Qiimaha & Qiimaynta
Ama qorshaha $ 60 doolar ama $ 120 doolar, waa inaad keydisaa wax ka badan qiimaha xubinnimada muddada hal sano ah. Haddii aad xadhiggan jiido; markaa, qiimaha xubinnimada asal ahaan waa bilaash.
Dib -u -dhig xubinnimada adiga oo isha ku haya kaydintaada xulashooyinkaan:
#1. Iibsashada Astaanta Kirkland
Noocyada Kirkland waxaa laga heli karaa oo keliya Costco. In kasta oo aysan ahayn magac summad, haddana waa astaanta khaaska ah ee Costco oo mudan in la iibsado.
Waxaad ka iibsan kartaa wax kasta oo ka mid ah tuna qasacadaysan ilaa xafaayadda ilmaha -kaliya hubi in wax kasta oo aad iibsanayso ay yihiin badeecadda sumadda Kirkland.
Haddii aad iibsato magacyada Kirkland, waxaad si dadban u iibsanaysaa sumadaha waaweyn magaca Kirkland. Iyo, waxay oggoshahay si aad wax badan u keydsato maadaama aad hiigsaneyso inaad iska bixiso khidmadda xubinnimadaada.
Tusaale ahaan, soo -saaraha Macallan 18 wuxuu soo saaraa Kirkland scotch halka Vodka uu soo saaray Grey Goose.
#2. Iibsashada Taayirada
Xeelad kale oo lagu dhimayo khidmadda xubinnimadaada ayaa ah in taayirada baabuurkaaga si joogto ah loo beddelo.
Waxaad ku qasban tahay inaad ka hesho qiimo aad u fiican sumadaha taayirrada ee aad ku kalsoon tahay. Dhab ahaantii, badankoodu waxay bixiyaan adeegyo cajiib ah sida wareegga nolosha, beddelaadda damaanad -qaadka, iyo sicir -bararka ku jira nitrogen ee waaxyada adeegga.
Asal ahaan, waxaad ku haysan doontaa baabuurkaaga si nabadgelyo leh waddada waddada oo leh lacag -dhimisyo kaa caawin kara inaad iska bixiso kharashka xubinnimada cusub.
#3. Gadashada Gaas
Iyada oo la adeegsanayo Costco, isticmaalka shidaal badan bil gudaheed waxay noqon kartaa hal dariiqo oo lagu dhimo qiimaha xubinnimadaada.
Waxay bixisaa shidaal qiime jaban kaa caawiya yaree miisaaniyaddaada shidaalka ee billaha ah. Xaqiiqdii waxaad ka heli doontaa qiimaha ugu fiican Costco. Adeegso heshiisyada xubinnimada Costco si aad u hesho xubinnimada Costco oo lacag la'aan ah.
#4. Iibsashada Kaararka Hadiyadda
Gadashada Costco xirmooyinka kaarka hadiyadda jumlada ah kaa caawin kara inaad wax weyn keydsato. Asal ahaan, waxaad ku bixin doontaa inta u dhaxaysa 25% iyo 35% kaararka hadiyadda.
Haddii ay tahay inaad iibsato kaarar hadiyado badan ah, iibsashada kaararka hadiyadaha badan ee Costco qiimo dhimis ayaa laga yaabaa inay tahay hal dariiqo oo lagu kabo kharashka xubinnimadaada oo dhan.
#5. Ka fiiri Kuuboonada Costco ee Degdegga ah
Costco sida caadiga ah waxay haysaa buug bille ah oo ay ka buuxaan rasiidh. Kuubannadaas, waxaad ku gaari kartaa kayd weyn. Waxa xiiso leh, uma baahnid inaad haysato rasiidhyo si aad uga faa'iidaysato kaydkaaga.
Waa hagaag, waa inaad la socotaa kaydadkaas sababtoo ah rasiidhadaani waa sahlan yihiin in la isticmaalo. Iyo, waad isticmaali kartaa iyaga oo aan ogayn inaad haysato.
Tani waxay si fudud kuugu dari kartaa oo kaa caawin kartaa inaad garaacdo khidmadda xubinnimada ee 60 doollar adigoon aad u xanaaqin.
#6. Isticmaal Ibotta
Haddii aad la yaabban tahay sida loo dukaameysto adigoon kuubannadaada haysan, Ibotta waa sharadkaaga ugu fiican.
Iyada oo Ibotta, waxaad ku wareegi kartaa siyaasadda ku -meel -gaarka ah. Nasiib darro, waxaa laga yaabaa inaadan ku kasban kaydka diiwaanka, marka laga reebo inaad sheegato lacag -dhimistaada adoo sawirro qaadaya.
Haddii aad si joogto ah u isticmaasho Ibotta sanad gudihiis, waxaa laga yaabaa inaad dib u dhigto qiimaha xubinnimadaada sanadka gudihiisa. Tani waxay kuu keeni kartaa xubinnimada Costco oo lacag la'aan ah.
#. 7 Iibso Tigidhada Filimka
Waxaad ka iibsan kartaa tikidhadaada filimka Costco si aad uga fogaato sumadaha qiimaha. Waxa xiise leh, Costco ayaa laga yaabaa inay ku siiso heshiisyada xubinnimada Costco 10 tikidh oo filim ah ugu yaraan 89 -90 doollar.
XIDHIIDHKA: Hubinta Koontada Vs Account Savings: Farqiga Iyo Sida Loo Doorto
Waxa kale oo laga yaabaa inaad ka hesho dalabyo wanaagsan Foojarada cuntada taas oo kuu yaraynaysa qiimaha salofka iyo soodhaha adiga. Ku iibsiga nacnaca badan Costco iyo ku -dhuumashada filimada ayaa kaa badbaadin kara kharashka.
Tan, waxaad ku bixin kartaa kharashka xubinnimada si aad ugu raaxaysato dalabyada xubinnimada Costco.
#8. Kordhi Abaalmarinta Lacag Caddaan ah
Markaad iibsaneyso kaararka ku siinaya abaalmarino lacageed, waxay kaa caawin kartaa inaad si buuxda u daboosho khidmadda xubinnimadaada sannadlaha ah.
Si kastaba ha ahaatee, lacagta caddaanka ah waxaa kaliya lagu isticmaali karaa Costco barnaamijkan dambe ee kaashka ah waxaa loo heli karaa oo keliya xubinnimada heerka fulinta. Iibsashada sida gaaska, kaararka hadiyadda, iyo maxkamadda cuntada uma qalmo.
#9. Ka faa'iidayso Qorshaha Ilaalinta Qiimaha
Markaad la socoto Costco, waxaad lacagtaada dib ugu heli kartaa mar kasta oo aad iibsato shay markii dambe la iibinaayo ama leh qiimo dhimis nooc ka mid ah.
Si fudud u tus miiska adeegga macmiilka rasiidkaaga markaad ogaato dhimista, Waxay kaa caawin doonaan inaad lacagtaada dib u hesho. Haddii aad la socoto kaydkaaga, tani waxay kaa caawin doontaa inaad garaacdo sumadda $ 60.
Waxa kale oo aad heli kartaa xubinimo Costco oo bilaash ah sannadka 2022 adiga oo helaya Heshiiska Xubinnimada. Ficilkan waxaa lagu gaari karaa siyaabaha soo socda:
#10. Iska ilaali Groupon iyo Heshiisyada Nolosha Bulshada
On Groupon iyo Nolosha Bulshada, waxaad ka heli kartaa khidmad xubinnimo oo la dhimay. Haddii kale waxaad heli kartaa heshiis baakad ah oo ka dhigaysa wax iibsiga mid u qalma.
Labadani waxay hore u bixiyeen heshiisyo xubinimo Costco oo la yaab leh. Marka, haddii aan heshiis la heli karin hadda, samir -mid ayaa dhici kara mustaqbalka.
Si aad u hesho ogeysiisyada heshiisyadii xubinnimada Groupon Costco ee ugu dambeeyay, si fudud iskaga qor wargeysyada.
#11. Weydii Su'aalo
Inkasta oo ay aad u qariib tahay, haddana way shaqaysaa. Weydiinta su'aalaha waa hal hab oo aan rasmi ahayn oo lagu raadin karo xubin -dhimis ama lacag la'aan.
Asal ahaan, waxaad u baahan tahay inaad koox hesho. Kooxdaadu waxay ka koobnaan kartaa qoys, saaxiibo, ama xitaa koox kali ah. Tilmaanta kaliya ee ku qasban inay shaqadan qabato ayaa ah in qof kasta oo kooxda ka tirsan uu raadinayo xubinnimada Costco.
Ka dib, liistada u gee maamulaha bakhaarka ee Costco. Si fudud u weydii haddii ay ku siin doonaan kooxda Costco xubinnimada qiimo dhimis haddii qof kasta oo ku jira liiskaaga uu iibsaday xubinnimada.
Jawaabtu waxay noqon kartaa haa ama maya. Marna ma sheegi kartid haddii ay haa tahay haddii aadan isku dayin. Gabi ahaanba ma jirto wax dhibaato ah marka maxkamad la soo taago. Waxay shaqaysay dhowr jeer oo hore.
Kooxdaadu waxay mar kale dhici kartaa.
#12. Samee Tijaabo Tijaabo
Mid ka mid ah faa'iidooyinka xubinnimada Costco ayaa ah inaad heli karto lacag celin buuxda mar kasta oo aadan ku qanacsanayn xubinnimadaada.
Marka, waxaad u abuuri kartaa tijaabo bilaash ah naftaada. Fiiri heshiisyada xubinnimada Costco ee cajiibka ah. Haddii aysan kula fadhiisan, si fudud u weydii lacag -celin.
Tani waa arrin aad u dhib badan. Si aad u noqoto dhinaca nabdoon, waa inaad dejisaa xasuusin si aad dhab ahaantii u kansali karto wakhtiga.
XIDHIIDHKA: 10ka Qaab ee ugu Wanaagsan ee Looga Iibiyo Faraantiga Ka Qaybgalka
#13. Adeegso Kaarka Lacagta ee Costco
Si aad u isticmaasho kanaalkan, hel xubin qoyskaaga ah ama saaxiib dhow oo diyaar u ah inuu ku caawiyo. Si fudud u raac iyaga oo ka iibso kaarka lacagta ee Costco miiska adeegga macmiilka.
Markaad hesho kaarka, isla markiiba bilaw dukaamaysiga. Tan, waxaad lacag ku kaydin kartaa Costco adiga oo aan haysan kaarka xubinnimada ee Costco.
#14. Iibsiga Maxkamadda Cuntada
Haddii aad hore u lahayd xubinnimada Costco, ka faa'iidayso raashinka jaban ee maxkamadda cuntada. Ka bax adiga oo wax ku jira gacmahaaga kadib markaad ku wareegtay dukaanka.
#15. Iibso alaabta internetka
Iibka Costco.com sida xubin aan xubin ka ahayn waxay soo jiidataa 5% dheeraad ah oo ka badan qiimaha xubinta. Tani ma khusayso dawooyinka dhakhtarku qoray.
Kuma bixinayso lacag dheeraad ah amarkaas oo waa ikhtiyaar aad u fiican haddii aad raadineyso inaad wax yar iibsato.
Haddii aad la socoto tiro heshiisyo wanaagsan ah, waxaa laga yaabaa inaad awooddo inaad iska bixiso kharashka xubinnimada.
#16. Samee Iibsasho xubin la'aan
Costco waxay u oggolaanaysaa dadka aan ka tirsanayn inay iibsadaan shayada qaarkood iyagoon haysan kaarka Xubinnimada Costco Bilaash ah. Tusaale ahaan, waxaad ka iibsan kartaa khamriga Costco haddii aad si joogto ah u cabto.
Waxaad ka heli kartaa heshiisyada ugu fiican sumadaha Kirkland. Tani waxay kuu badbaadin doontaa lacag badan. Waxa xiisaha lihi, waxaad isticmaali kartaa kaydkaas adiga oo aan xubin ka ahayn.
#17. Iibso Dawooyinka
Daawooyinka caadiga ah waa ka jaban yihiin marka laga soo iibsado Costco. Xubnaha iyo kuwa aan xubinta ka ahaynba way iibsan karaan dawooyinkan. Sharciyo gaar ah oo ay samaysay FDA ayaa tani suurtogal ka dhigaya.
Tani waa hab kale oo weyn oo lagu kordhiyo kaydkaaga.
#18. Adeegso Adeegyada Fudud ee Costco
Costco optical waxay u tagtaa labada qofba kaarka xubinnimada Costco iyo kuwa aan xubnaha ahayn. In kasta oo aad u baahan tahay xubin Costco si aad u iibsato muraayado ama xiriiro, haddana weli waa hab fiican oo aad wax uga iibsato Costco.
#19. Kaliya Kaydinta
Haddii ka dib markaad akhrido gabalkan, aad dareento in siyaabahan lagu helo xubinnimada Costco oo lacag la'aan ah aysan kuu shaqaynayn, si fudud u xafid kaydka.
Siyaabaha kor ku qoran, waxaad weli ku iibsan kartaa qiimaha Costco adiga oo aan haysan kaarka xubinnimada Costco.
Si kastaba ha noqotee, haddii aadan rabin inaad iibsato kaarka xubinnimada Costco, markaa ka dhig kaydinta iyo ciyaarta qiimaha dukaamada kale sida Walmart, Best Buy, iyo kuwa kale.
Dalabyada xubinnimada Costco waa wax weyn waxayna soo jiidataa faa'iidooyin badan. Helitaanka mid waxay noqon kartaa caqabad weyn in kastoo ay gebi ahaanba u qalanto.
Haddii qiimaha iibsashada xirmada ugu yar ay kuguula muuqato mid aad u culus, isku day siyaabahan si aad u hesho Xubinnimada Costco Bilaashka ah 2022. Si taxaddar leh, u akhri si aad u hesho fursad adiga kugu habboon.
Waa hagaag Wallet.com - Ku hel Xubinnimada Costco lacag la’aan
Mashed.com - Ha iibsan Kaarka Xubinnimada Costco
Adeegga macaamiisha. Costco -Waxay bixisaa Costco Xubinimo Bilaash ah ama Qiimo -dhimis ah
Cun This.com - Xubinnimada Costco
Miyuu Fundrise Xalaal yahay - Dib -u -eegis Buuxda ee Fundrise
Miyuu AAA Mudan Yahay Sannadka 2022? Xubinnimada, Kharashka, Iyo Hawlaha
Sida Loo Helo Xirmada Xubinnimada $ 100 ee Xubinta | Eeg dhammaan Baakadaha
Sida Loo Helo Shahaadada Qorshaynta Maaliyadda
Ma jiro wax caqli -gal ah marka ay timaaddo qasaarooyinka khidmadaha xad -dhaafka ah. Suugaan ahaan, qof walba wuu saameeyay. The…
Waa immisa kharashka Software Billing Medical?
Xirfadle kasta oo daryeel caafimaad, software biilasha caafimaadka waa qasab in la haysto. Software-ka biilasha caafimaadka ayaa sahlaya in la galo…
10ka Jiir ee ugu Qaalisan Aduunka | 2022
Sida dharka, saacadaha, iyo kabaha, qalabka kumbuyuutarka - gaar ahaan jiirarka kombuyuutarka ayaa sidoo kale u socda maalmahan. Dadka intiisa badan…
Kaydka ugu Wanaagsan ee ka hooseeya 10 Doollar Si Joogto ah 2022
Suuqa saamiyada, waxa muhiimka ahi waa qiimo ee maaha tiro. Sababtoo ah kaydka ayaa leh qiimo sare...